Torohevitra momba ny fisafidianana hotely ho an'ny fianakaviana | Vaovao momba ny dia
Torohevitra momba ny fisafidianana hotely ho an'ny fianakaviana
Susana Garcia | | Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Rehefa tanora isika ary mandeha dia tsy mila miahiahy momba ny fananana toerana fitsaharana indraindray, fa tsy misy fihatsarambelatsihy intsony. Fa rahoviana manao dia izahay mianakavy tsara ny mahita trano fonenana mifanaraka amin'ny tsiron'ny tsirairay fa tsy ny olon-dehibe ihany. Izany no antony nanombohanay nanilika ny sasany noho ny toetrany, ny toerana misy azy ireo na ny serivisy ananan'izy ireo.
Hanome anao vitsivitsy izahay Torohevitra hodinihina rehefa misafidy hotely ho an'ny fianakaviana isika. Na ny fisafidianana efitrano misy toetra manokana aza dia mety hitondra fiovana lehibe, noho izany mahaliana ny mazava tsara momba ny zavatra tsy maintsy tadiavintsika hijanona rehefa mikasa ny vakansy ho an'ny mpianakavy.
1 Efitra na trano
2 Faritra ankizy
3 Serivisy ho an'ny fianakaviana
4 Fialamboly ho an'ny rehetra
Efitra na trano
Ny toerana hijanonantsika dia zava-dehibe, ary ny efitrano no hampiadana antsika rehefa miala sasatra aorian'ny dia lavitra na andro fitetezana ilay faritra. Ka tsy maintsy misafidy tsara isika. Misy efitranon'ny fianakaviana, izay matetika no mora kokoa. Na izany aza, ho an'ireo izay te hankafy tsiambaratelo kely sy fisarahana amin'ireo ankizy, ny fahafahany manakaiky azy ireo amin'ny fotoana iray, dia misy ny efitrano mampifandray. Misaraka izy ireo fa ampifandraisin'ny varavarana, noho izany dia hankafy ny filaminana isika ary amin'izay dia afaka miaraka daholo isika isaky ny maniry.
Ao amin'ireo efitrano dia mila mijery ihany koa ianao raha manana izy ireo misy ny fandrian-jaza raha mandeha miaraka amin'ny zazakely isika, ka tsy mila mitondra ny fandriana fandehanana. Etsy ankilany, matetika koa izy ireo dia manolotra fandriana fanampiny amin'ny efitrano tsotra, izay mety ho safidy ara-toekarena tokoa.
ny Safidy lehibe hafa ny trano, ary misy toeram-ponenana maro izay manana faritra iraisana amin'ny fialamboly sy trano hipetrahana feno trano. Tena mahazo aina izy ireo ary raha tsy te-hahandro isika dia afaka misafidy orinasa manana trano fisakafoanana. Hanana fampiononana mitovy amin'ny ao an-trano sy ny efitrano misaraka isika. Izy ireo matetika no safidy tsara indrindra ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Raha mandeha miaraka amin'ny ankizy isika, ny zavatra sarotra dia ny hampialamboly azy ireo amin'ny fotoana rehetra fa tsy hankaleo mandritra ny fialantsasatra. Fantatsika fa fitsidihana ara-kolontsaina na fitsangatsanganana amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa mahita tanàna no mankany aminy, noho izany ny zavatra tsara indrindra dia ny misafidy hotely misy faritra filalaovan-jaza ahafahan'izy ireo mankafy. Izy ireo dia mety ho pisinin-jaza, ary koa faritra filalaovana anaty trano na kianja filalaovana any ivelany. Ny hotely fahavaratra sasany aza misy zaridaina kely ho azy ireo. Ny ora fahafinaretana dia azo antoka miaraka amin'ireo toerana ireo. Ankoatr'izay, ao amin'ny ankamaroan'ireto hotely ireto dia misy klioban'ny ankizy izay anaovana hetsika miaraka amin'ireo mpiasa izay milalao miaraka aminy, mba hahafahan'izy ireo milalao miaraka amin'ny ankizy hafa mitovy taona aminy sy amin'ireo hetsika mikendry azy ireo.
Serivisy ho an'ny fianakaviana
Indraindray isika dia tsy maniry ny hananan'ny faritra fandraisam-bahiny lalao ho an'ny ankizy, fa koa ny serivisy mifantoka amin'ny fampiononan'ny fianakaviana. ny afaka mandray ny biby miaraka amintsika dia iray amin'izany. Azontsika atao ihany koa ny mitady hotely misy serivisy fitaizan-jaza mba hikarakarana ny ankizy rehefa mitsidika ireo toerana akaiky misy fiadanan-tsaina isika. Safidy iray hafa izay mirona amin'ny tiany ny manolotra sakafo manokana ho an'ny ankizy ny trano fisakafoanana, mba hihinanany sakafo matsiro kokoa.
Fialamboly ho an'ny rehetra
Izahay dia tsy mitady ankizy fotsiny hampiala voly ny tenany mandritra ny fialantsasatra. Amin'ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny dia azo atao ny mahita ny faritra ho an'ny ankizy, fa koa ny toerana hafa hahafahan'ny olon-dehibe mankafy amin'ny fotoana iray. Misafidiana hotely manana kianja filalaovana na club kely, nefa koa a faritra spa ho an'ny olon-dehibe mety izany, satria azo antoka ny fialan-tsasatra. Betsaka no manana pisinina mafana miaraka amin'ny jet, Jacuzzi, sauna ary faritra iray hanaovana fanatanjahantena. Azontsika atao koa ny mitady hotely misy kianja tenisy, dobo filomanosana ivelany ho an'ny olon-dehibe ihany ary hevitra hafa tadiavinay. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fahafalian'ny fianakaviana iray manontolo ny dia, na dia miaraka amina hetsika natao ho an'ny tsirairay aza izy io. Ary raha mila hetsika iraisana isika dia afaka mitady hotely mandrindra fitsangantsanganana ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Ny serivisy ao amin'ny hotely resahina dia zava-dehibe, fa toy izany koa ny toerana. Mieritrereta toerana iray azon'ny rehetra ankafizina. Ny hotely an-tendrombohitra dia misy toeram-pisakafoanana misy ski izay misy hetsika ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, ny sekoly ski ary zavatra hafa. Ny trano fandraisam-bahiny amoron-dranomasina dia manana dobo filomanosana ary koa morontsiraka ankafizinao. Zava-dehibe ny trano fandraisam-bahiny no afovoany, hisorohana ny dia lavitra izay mety mandreraka ny ankizy, na mila manofa fiara hivezivezy. Ny trano fandraisam-bahiny izay akaikin'ny faritra mety hahaliana antsika dia hevitra lehibe, na valan-javaboary, resort na ski na morontsiraka ary toerana voajanahary hanaovana hetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy » Torohevitra momba ny fisafidianana hotely ho an'ny fianakaviana
Trano fandraisam-bahiny 5 atoro ao Tokyo
Castle iray isaky ny faritany Andalusia (II)